The Presence of Christ - I-Beroean Pickets - Ukubuyekezwa kwe-Webhu.org
Zonke Izihloko > Ubukhona bukaKristu
-Nov 7, 2012
UPeter ukhuluma ngobukhona bukaKristu esahlukweni sesithathu sencwadi yakhe yesibili. Wayazi ngaphezu kokuningi ngalobo bukhona njengoba ayengomunye wabathathu kuphela abakubona kumelelwa ukuguqulwa isimo okumangalisayo. Lokhu kubhekisela esikhathini lapho uJesu ethatha khona ...
Isahluko 16 sencwadi ethi Revelation Climax sikhuluma ngeSambulo 6: 1-17 esidalula abagibeli bamahhashi abane be-Apocalypse futhi kuthiwa sifezeka “kusukela ngo-1914 kuze kube ekubhujisweni kwalesi simiso sezinto”. (re p. 89, isihloko) Abagibeli bamahhashi bokuqala bachazwa ku ...
Lokhu kungokokuqala ochungechungeni lwezikhala eziphenya ngomthelela wokususa u-1914 njengesici ekuchazeni isiprofetho seBhayibheli. Sisebenzisa incwadi yeSambulo Umvuthwandaba njengesisekelo salolu cwaningo ngenxa yazo zonke izincwadi ezihlanganisa isiprofetho seBhayibheli, inakho kakhulu ...
Lapho Izinkozi Zikhona…
Uma ungumfundi wesikhathi eside wezincwadi zethu, kungenzeka ukuthi uke wahlangabezana nokuchazwa okungajwayelekile okushiye unwaya ikhanda lakho. Kwesinye isikhathi izinto azenzi mqondo ukushiya uzibuze ukuthi ngabe ubona izinto kahle noma cha. Iningi lokuqonda kwethu ...